Resy tosika ny kere any Atsimo : Tsapan’ny vahiny ny ezaky ny fitondram-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaResy tosika ny kere any Atsimo : Tsapan’ny vahiny ny ezaky ny fitondram-panjakana
Nidina ifotony nanao tombana ny fivoaran’ny ezaka momba ny ady tamin’ny tsy fanjarian-tsakafo nihatra tamin’ny mponina tany atsimon’ny Nosy tamin’iny taon-dasa iny ny iraky ny Firenena Mikambana sy ny solontenan’ny masoivohon’ny Japon ary Norvège. Nanatrika an’ity tombana ity sy nidina tany an-toerana koa ny Sekretera Mpanatanteraka eo anivon’ny Birao nasionaly mpandrindra ny fiatrehana ny loza voajanahary (Bngrc), izay teratany vahiny ihany koa, andriamatoa Thierry Venty.
Azo tsapain-tanana ny fihatsaran’ny fiainan’ny mponina izay tratran’io tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny haintany « El Ninô » io. « Tsara kokoa noho ny tamin’ny taon-dasa ny fari-piainan’ny olona. Efa feno sakafo azo vidiana eny an-tsena. Ny olona ihany koa afaka mividy sakafo. Hitanay maso mihitsy ny fahampian’ny sakafo mitobaka eny amin’ny tsena. Ny antsa-manilan’ireo mponina ireo anefa, tamin’ny taon-dasa dia tao anaty tsy fahampiana tanteraka. Na ny sakafo vidiana aza manahirana”, hoy ny voalazan’ilay tatitra.
Mandray an-tanana ny fanaraha-maso hatrany anefa ny Bngrc mba hitazonana an’io vokatra tsara io. Ahiana mbola hiverina mantsy ilay toe-tany mitarika hain-tany “El Nino” araky ny tomban’ny mpahay toetr’andro. Loza voajanahary toa ny loza voajanahary rehetra moa izany ka tsy misy azo atao afa-tsy ny miomana miatrika izany ihany.
Ny ezaky ny fitondram-panjakana Malagasy tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nahazoana izao vokatra tsara izao. Imbetsaka izy no nidina tany an-toerana ary nanome baiko an’ireo minisitra samihafa voakasiky ny fanarenana ara-tsosialin’ny mponina tao amin’ny faritra Androy sy Anosy mba hanao izay ezaka rehetra hampitsaharana ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo. Nisy araka izany ny fizarana masomboly azo hamokarana avy hatrany. Fanomezana tany ho an’ireo tantsaha ary fanampiana azy ireo tamin’ny fiasana ny tany. Ireo tokantrano tena marefo nozaraina vola tamin’ny alalan’ny finday. Nanome tantsoroka an’izany koa tetsy andaniny ny Ong sy ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny Mponina.
Hatramin’izay nisian’ny mpitondra lanim-bahoaka nifandimby teo amin’ny fitondrana, dia ny filoha Hery Rajaonarimampianina no naharesy tosika ny mosary tany Atsimo, tamin’ny alalan’ny fanampian’ireo mpiara-miombon’antoka aminy rehetra. Tsy ny lafin’ny tsy fanjarian-tsakafo ihany moa no nojereny fa ny fametrahana toho-drano sy ny fotodrafitrasa maharitra ho an’ireo faritra ireo ihany koa.